एमाले–माओवादी एकतापछि निर्वाचन चिह्न ‘सूर्य’ रहने समझदारी
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “हामीबीच एकताका लागि ठूलो विवाद छैन, निर्वाचन चिह्न त विवादको विषय नै होइन, मिलिसक्यो । अन्य केही केही विषयलाई फाइनल टच दिने काम दुई अध्यक्षले गर्नुहुनेछ र अर्काे संयोजन समितिको बैठकले निर्णय गर्नेछ ।”
पोखरा विमानस्थलको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित
डा. केसीले रुँदै के भने ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
सरकार होइन, डा. केसी पो रहेछन् कम्युनिस्ट